लकडाउनः बुद्धिचाल संघलाई ‘के खोज्छन् कानो? आँखा’ - eNayapusta
सुकदेव चामलिङ ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०३:३४ 823 पटक हेरिएको
काठमाडौं : चेसमात्रै एउटा यस्तो खेल हो, जसको अहिले विश्वस्तरीय ठूल्ठूला प्रतियोगिता आयोजना भइरहेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वका खेलकुद गतिविधि ठप्प बनिरहेको बेला चेसका अनगिन्ती प्रतियोगिता सञ्चालित छन्। कतिपय सम्पन्नसमेत भइसकेका छन्।
अन्य खेलकुदको तुलनामा चेस आयोजना गर्न सहज पनि छ। यसैले लकडाउनकै अवस्थामा पनि विश्व चेस महासंघ (फिडे)ले विभिन्न आधिकारिक प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको छ। र, आफूलाई थप सक्रिय बनाइरहेको छ।
विशेषगरी, फिडेले लकडाउनका कारण घरमै थुनिन विवश खेलाडीहरुलाई समय कटाउन सहज हुनका साथै चेस गतिविधिलाई ठप्प हुन नदिन अनलाईन प्रतियोगितामा बढी जोड दिइरहेको छ। यसैले फिडेले विभिन्न अनलाईनसँगको सहकार्यमा अत्यधिक धनराशीका प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको छ।
गत १० मेमा मात्रै फिडेको आधिकारिक प्रतियोगिता ‘अनलाईन नेसन्स कप’ सम्पन्न गर्यो। अमेरिका, भारत, रसियाजस्ता दाबेदार मुलुकलाई पन्छाउँदै चीनले सो प्रतियोगिता जित्यो। प्रतियोगिता चेस डटकमसँगको सहकार्यमा फिडेले आयोजना गरेको थियो। यसबाहेक पनि अन्य व्यक्तिगत र टिम च्याम्पियनसिप आयोजना गरिरहेको छ।
फिडेले भर्खरै १८ मेमा ‘चेकमेट कोरोनाभाइरस’ प्रोजेक्ट सुरुवात गरेको छ। साथै, आफ्ना सदस्य राष्ट्रका संघहरुलाई चेस गतिविधि सञ्चालनका लागि वित्तीय सहयोग दिने घोषणासमेत गरेको छ। फिडेको यसखाले वित्तीय सहयोग घोषणा लगभग दुई साताअघिको हो।
तर, चेस खेलको अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै आइरहेको नेपाल बुद्धिचाल (चेस) संघले यसबारे खासै चासो लिइरहेको देखिँदैन, जसले गर्दा फिडेको सहायता नै गुम्ने अवस्था बनेको छ।
नेपालमा लकडाउन सुरु भएको करिब दुई महिना पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा नेपालका खेलाडीहरुले आफ्नै प्रयासमा पटक–पटक अनलाईन प्रतियोगिता गरिसकेका छन्। तर, कुनैपनि त्यसखाले प्रतियोगितामा बुद्धिचाल संघको संलग्नता छैन।
बरु, लकडाउनको समयमा बुद्धिचाल संघलाई ‘के खोज्छस् कानो? आँखा’ भनेझै भएको छ। सामान्य अवस्थामा पनि चेस खेल प्रवद्र्धनमा प्रभावशाली उपस्थिति देखाउन नसकिरहेको बुद्धिचाल संघलाई लकडाउन हाइसन्चो भइदिएको छ।
बिन्दास बुद्धिचाल संघ
लकडाउनकै अवस्थामा पनि चेसका गतिविधि तीव्र बनाउन सकिने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै बुद्धिचाल संघ बिन्दास बसिदिएको छ। गत चैत अन्तिम सातामा हुने भनिएको सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन लकडाउनका कारण स्थगित भएपछि बुद्धिचाल संघको अहिलेसम्म एकपटक पनि बैठक बसेको छैन।
यसको मूलकारण बुद्धिचाल संघमा नेतृत्व गरिरहेका पदाधिकारी र सदस्यहरुबीचको बेमेल हो। अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठ र महासचिव हिराकाजी महर्जनबीच तालमेल नमिल्दा बुद्धिचाल संघ निष्क्रियप्रायः छ।
चेस खेल प्रविधिमैत्री हुँदाहुँदै पनि बुद्धिचाल संघनै निष्क्रिय बसिदिँदा खेलाडीहरु हैरानमात्रै छैनन्, नेतृत्वप्रति उनीहरुको असन्तुष्टी पनि भुसको आगोसरि सल्किरहेको छ। ‘संघको पदाधिकारीहरुको व्यवहार देखेर दिक्क भइसकियो’, पूर्व ओलम्पियाड एक खेलाडी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘अब विस्फोट हुनमात्रै बाँकी छ।’
तर, बुद्धिचाल संघका अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठले लकडाउनका कारण खेलाडी सबै घर–घरमै रहेकाले प्रतियोगिता सम्भव नरहेको प्रतिक्रिया दिए। अनलाईन प्रतियोगिताका लागि पहल त गर्न सकिन्छ नि? भन्ने ईनयाँपुस्ताको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्लानिङ गर्नुपर्छ।’
नेकपा गुटको असर
फिडेले विश्वव्यापी रुपमा चेस खेलको गतिविधि बढाइरहँदा नेपालमा एउटा पनि आधिकारिक प्रतियोगिता नहुनु विडम्बना हो। अझ फिडेले आर्थिक सहायता घोषणा गरिसक्दा समेत नेपाल बुद्धिचाल संघ निष्क्रिय देखिनु उदेकलाग्दो छँदैछ।
बुद्धिचाल संघमा यसखाले परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा अध्यक्ष र महासचिवको गैरजिम्मेवारीपन बढी कारक पाइएको छ। अध्यक्ष एकलाल र महासचिव हिराकाजीले एकअर्कालाई पिठ्यु फर्काइदिँदा बुद्धिचाल संघले अपेक्षित गतिविधि गर्न नसकेको केन्द्रीय समितिभित्रैका अधिकांश सदस्यहरुको मत छ।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार दुई जना नमिल्दानै संघले गति लिन नसकेको हो। उनीहरुबीच बेमेल हुनका मुख्यकारण नेकपाभित्रको गुटले काम गरेको उनी बताउँछन्। अध्यक्ष एकलाल नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुटका हुन्। महासचिव हिराकाजी वरिष्ठनेता माधव नेपाल गुटका हुन्।
नेपाल बुद्धिचाल (चेस) संघका महासचिव हिराकाजी महर्जन र अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठ (घडीको सुईअनुसार)।
अझ नेकपा बन्नुपूर्वको तत्कालीन एमालेका मकवानपुर जिल्ला सचिव रहेका एकलालले हिराकाजीलाई गन्दै नगन्ने भएकाले पनि संघले अपेक्षित काम गर्न नसकिरहेको जानकार बताउँछन्।
पार्टीको जिल्ला कमिटीमै रहिसकेका एकलालले भातृसंगठन युवा संघका ललितपुर अध्यक्षमात्रै भएका हिराकाजीलाई सधैं आफूभन्दा सानो ठान्ने गरेका छन्, जसका कारण यी दुईबीच एकअर्कामा आत्मिय सम्बन्ध छैन। हिराकाजी दुई पटक युवा संघ ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष भइसकेका छन्। उनी पछिल्लो समय पार्टीअन्तर्गतकै खेलकुद महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्।
यसरी नेकपाभित्रको फरक गुटको द्वन्द्वले यी दुई बीच आत्मिक सम्बन्ध हुन नसक्दा बुद्धिचाल संघले क्षति ब्यहार्नु परिरहेको छ। साथै, खेलाडीको भविष्यसमेत अन्योलग्रस्त छ।